I-Semalt Expert: Ukukhutshwa kwe-Intanethi ye-IP Kwi-Google Analytics
Abalawuli bewebhusayithi kule nkqubela ye-SEO baxabisa ukuba iGoogle Analytics njengesixhobo sokuhlalutya isithuthi sewebhu . Inika iinkcukacha ezibalulekileyo ezichaphazelekayo kumashishini ngokuphathelele ukusebenzisana kwabo abathengi kwi-Intanethi. Ngokuqinisekileyo, umntu akanako ukufakazela ukuchaneka kwale datha ebalulekileyo kuba abanye abasebenzisi batyelela iiwebhusayithi ukuba bafumane ulwazi oluthile ngaphandle kokuthenga nantoni na.
Nangona kunjalo, u-Igor Gamanenko, oyi-12 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuchaneka kweengxelo zakho, kufuneka uhlalutye yonke imithombo yolwazi ukwenzela ukuba iingxelo ezenziwe zibonise kuphela iwebhusayithi iindwendwe. Okumangalisayo kukuba, i-Google Analytics ibhalisa kwakhona ukungena kwiimvavanyo zomlawuli nangona bengakhange bathathe nantoni na into ngaphandle kwesondlo. Ngoko ke, umlawuli kufuneka azibandakanye kwiGoogle Analytics ngokukhawulela idilesi ye-IP yesizinda kwiingxelo zeGoogle Analytics. Ngaphambi kokuba sibone indlela esinokuyenza ngayo, kufuneka siyiqonde indlela iProtokholi ye-Intanethi (IP) idibana ngayo. Zonke izixhobo zombane ezisetyenziselwa ukufikelela kwi-intanethi ine-ad ye-IP eyodwa. Uya kufuneka ufumane idilesi ze-IP kuzo zonke izixhobo ezisetyenziselwa ukungena kwiwebhusayithi kunye ne-Google Analytics.
Indlela elula neyona ndlela ilula kakhulu yokufumana idilesi yakho ye-IP isesha "yiyiphi idilesi yam ye-IP" kwiinjini zokukhangela njengeGoogle. Amanani edilesi ye-IP akhupha kwicandelo lesiphumo esilandelayo esiphezulu kwiphepha lewebhu. Kufuneka ukopishe le manani edilesi ye-IP yexesha elizayo. Qhubela kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics, nqakraza kwi-'Download 'ithebhu kwingxenye ephambili yephepha. Kukho inqaku elithi 'Izihlungi' kwikholam yesithathu kwicala lasekunene lekhasi lewebhu. Khetha 'Ifayile' uze ugqibe isinyathelo sokugqibela sokwenza icebo usebenzisa i-'+ New Filter'. Uya ku funeka uqambe igama elitsha.
Kule nqanaba, kufuneka uqwalasele icebo. Kukho 2 ukhetho lwendlela yokucwangcisa uhlobo; 'Ulungisiwe' kunye 'Uhlobo.' Emva koko, khetha phakathi kwe "Hlanganisa" kwaye 'Faka' idilesi ye-IP. Kwimeko yethu, kuya kufuneka ukuba uchaze umthombo okanye indawo yokuhamba kwendlela ukuze ungabandakanyi okanye udibanise. inketho kwaye kwimenyu ehlayo elandelelweyo nqakraza "ezilinganayo." Imenyu esiphumelayo iya kukucela ukuba ubonise idilesi ye-IP yesicatshutshulwa ngaphambili.Cima inkqubo ngokuchofoza ukhetho lwe-'Gcina 'ukuze ukucwangciswa kusebenze Le nkqubo yokubandakanya okanye ukungabandakanyi iyasebenza kwidilesi enye ye-IP.Ukuba usebenzisa amacebo amaninzi kwaye ngenxa yoko unamakheli amaninzi e-IP ukuba ungabandakanyi, kufuneka uphinde ulandele onke amanyathelo axoxwe ngawo ngentlawulo efanayo.
Xa idilesi ze-IP zingabandakanywa kwi-Google Analytics, ukhululekile ukuphequlula kwiwebhusayithi yakho ngaphandle kokukhathazeka ngokuthumela ugaxekile ekuboniseni iingxelo. Idatha egcinweyo ngoku ichanile kwaye imele umenzi wamakhasimende.